Kedu ka oria ojoo siworo ghọọ wok a n'ime ogige maka onye guzobere Camile Thai Brody Sweeney | Franchiseek
Kedu ka oria ojoo siworo gbanwee ma banye n'ime ogige maka onye guzobere Camile Thai Brody Sweeney
»Kedu ka oria ojoo siworo gbanwee ma banye n'ime ogige maka onye guzobere Camile Thai Brody Sweeney
Brody Sweeney, onye isi Camile Thai, na-enwe obi anụrị - yana ikpe mara ya. Mmetụta nke Covid-19, nke kpara ọtụtụ azụmaahịa nri gafee Ireland, edebeghị aha naanị na ụlọ ọrụ ya.
Mgbe obere mkpirisi gachara na Machị, azụmaahịa na-ere ahịa tupu afọ gara aga. Salesre dị ka ire ndị dị na Ireland ji 6% rọọ maka ọkara mbụ nke 2020. Ahịa ndị dị na London, ebe obibi na mpaghara Camile ise, ejiriwo 35% mụbaa n'otu oge ahụ, n'agbanyeghị site na obere ala.
Azụmaahịa ahụ na-atụ anya ịtụgharị € 30m afọ a n'ofe ụzọ 33 ya, nke ọtụtụ ndị na-ejikwa franchisees arụ ọrụ.
Sweeney, onye tinyere aka na Njikọ Restaurantslọ oriri na ọ ourụ thatụ anyị nke gọọmentị na-akwado gọọmentị maka nkwado maka izu ike, maara nke ọma ụdị mgbu ndị ọrụ ibe ya na-ere.
Tọrọ ntọala na 2010, Camile ehiwela ebe dịpụrụ adịpụ ọ kachasị ukwuu na mpaghara ime obodo na iburu ụzọ nye ụlọ maka nri. Ọ bụ usoro ahia egosila na ọ bụ oria ojoo.
"Anyị na-achịkwa azụmaahịa ahụ nke ọma, mana eziokwu na anyị were usoro nke na-ebubata ụlọ na mpaghara, na nke ahụ bụ chi," ka Sweeney na-ekwu.
N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ emepụtala ụdị mgbanwe ọnụahịa na-akwụ ụgwọ iji nye ndị ahịa nri nwere nsogbu nsogbu nwere nsogbu n'obodo ndị dị na mpaghara iji nyefee ndị ọrụ Camile Thai. Nke mbụ n'ime ndị a merepere n'oge na-adịbeghị anya na Sligo ma fuo onye nwe aha ya bụ € 50,000 dị ka ndị na-emegide € 300,000 achọrọ maka franchise Camile. Sweeney na-atụ anya imepe ụzọ ebe ise ma ọ bụ isii na Ireland na ikekwe otu ọnụọgụ na London.
Iji kpatulata atụmatụ ya na-eto eto Camile, nke gụrụ Web Summit onye nchoputa Paddy Cosgrave na onye isi ike Brian Caulfield dị ka ndị na-eketa ego, na-eme atụmatụ ịmalite mkpụrụ ego nke mpụga nke € 10m n'ime ọnwa ole na ole sochirinụ. A ga - eji ego ahụ mee ka ọnụnọ ya dị na London ruo ebe 50. N'agbanyeghị ụlọ ọrụ ahụ abịakwutela ịtọlite ​​na Dubai ma na-ele anya America, Sweeney gbadoro anya isi obodo UK. Anyị kwesịrị ịdị mpako. Anyị kwesịrị ịrụ ọrụ na London tupu anyị aga ebe ndị ọzọ, "
€ 10m, nke ihe dị ka € 6m nke ihe mpụga ime obodo ga-ebugharị, ga-akụkwa n'ime teknụzụ ọhụrụ. A zụlitere ngwa ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ n'ime ụlọ ma na-ere ihe karịrị € 1m na ahịa n'otu ọnwa, mana ọchọrọ nkwalite iji na-enwe ọsọ ọsọ na ụdị Deliveroo na Just Eat.
Camile na-achọ ịgbakwunye robotik n'usoro mmepụta ya. Sweeney kwuru, sị: "Ọ bụrụ n'iche maka usoro esi esi nri n'ụtụtụ, ọ na-ekwu okwu ugboro ugboro, ọ ga-agbanwekwa ya nke ọma." “Anyị na-ele anya iji otu ụdị akpaka eji dochie anyị. Ebumnuche nke ahụ bụ na anyị ga-ebelata ụgwọ ọrụ ọrụ anyị ma mee ka ọrụ anyị dị ngwa. ”
Mgbe ahụ enwere drones. Ekwuputala n’afọ a na Camile ga-ebugara Manna onye ọchụnta ego Bobby Healy amalite drone. Ndị ahịa ga-enwe ike iji teknụzụ Google Earth dozie ebe ọmụmụ ihe ga-agbadata na usoro biodegradable site na igwe na-akpaghị aka nwere ike ịga njem na 80kph.
Atụmatụ ahụ, nke chọrọ ka ewepu ya n'aka onye na - ahụ maka ụgbọ elu, ka ọrịa ojoo mebiri emebi ka Manna na - ebugharị akụrụngwa ya ka ọ bụrụ nnwale maka ndenye ọgwụ maka ụdị HSE.
Sweeney na-atụ anya ibuga nri mbụ ya site na ikuku n'afọ na-abịa. O kwuru, sị: "Drones bụ n'ezie enweghị ndị na-enwe obi ike na-azụ ahịa. A ga-ebelata nnyefe ego, ndị ahịa ga-enweta iwu ha ọsọ ọsọ, ọrụ ahụ na-adọba igbe nkwado Camile.
Ọ dị mma ịsị na Sweeney na-enwe nsogbu kachasị mma n'oge a ma e jiri ya tụnyere nlaazu ikpeazụ, mgbe ọ tụfuru nchịkwa mgbochi mmanya O'Briens nke o guzobere n'oge ngwụsị 1980s.
Ọ sịrị, “Isi awọ awọ bara uru, “Ebe anyị na O'Briens gabigara kpamkpam, anyị ahapụghị ka nke ahụ mee ọzọ. Anyị esiwo na steepụ pụta n'oge banyere ihe anyị ga-eme maka nke a, kama ikwe ka ihe mee anyị. ”